Waa maxay falanqaynta? Teknolojiyada Falanqaynta ee Wada Go'aamada Suuqgeynta
Mararka qaarkood waa inaan dib ugu noqonaa aasaasiga oo runtii ka fikirnaa tikniyoolajiyadan iyo sida ay noo caawin doonaan. Falanqaynta heerka ugu aasaasiga ahi waa macluumaadka ka dhasha falanqaynta nidaamsan ee xogta. Waan ka wada hadalnay Ereybixinta falanqaynta sanado hada laakiin mararka qaar way fiicantahay inaad dib ugu laabato aasaaska.
Qeexida Falanqaynta Suuqgeynta
Suuq- Analytics wuxuu kakooban yahay geeddi-socodka iyo teknoolojiyada u oggolaanaysa suuqleyda inay qiimeeyaan guusha dadaalladooda suuq-geyn iyagoo cabbiraya waxqabadka (tusaale ahaan, baloog-garaaca ka soo horjeedka warbaahinta bulshada iyo isgaarsiinta kanaalka) iyadoo la adeegsanayo cabbiro ganacsi oo muhiim ah, sida ROI, u gaar ahaanshaha suuqgeynta iyo waxtarka guud ee suuqgeynta Si kale haddii loo dhigo, waxay kuu sheegeysaa sida barnaamijyadaada suuq-geynta ay run ahaantii u shaqeynayaan. via SAS
Waa maxay falanqaynta - Fiidiyow ka socda IBM
Maaddaama ay ku saabsan tahay suuqgeynta internetka, Analytics Web dhufto ee waa nidaamyada in ururiyaan, isu geeyo oo ka warbixiyaan waxqabadka dadka soo booqda boggeena internetka ama isdhexgalka warbaahinta bulshada. Waxaa jira hoosaadyo ah Analytics in suuqyayaashu ay ogaadaan kana faa'iideystaan ​​waqti ka waqti:
Falanqaynta Dhaqanka - waddooyinka ay booqdayaashu qaadaan iyo sida ay ula falgalaan bog kasta waa xog muhiim ah oo lagu fahmayo sida boggaaga loogu wanaajin karo kaqeybgal kordhin iyo beddelaad. Dad aad u tiro badan ayaa kaliya naqshadeeya goob qurux badan oo ay iloobaan inay dhab ahaantii tahay albaab laga ganacsado. Waxaa jira tan cilmiga sayniska iyo khibrad la adeegsan karo oo lagu kordhin karo qiimaha bartaada ku leedahay ganacsigaaga.
Sirdoonka Ganacsiga - ama BI Analytics udub dhexaad dhammaan dhinacyada waxqabadka hay'adahaaga, laga bilaabo suuq-geynta illaa hawlgallada iyo xisaabinta, hoggaanka sare si loola socdo dabeecadda shirkadda. BI waxay udub dhexaad u tahay kormeerida iyo qorshaynta waxqabadka ururada waaweyn iyo kuwa waaweyn.
Falanqaynta Beddelka - beddelidda bogga waa waxqabad qiime leh. Tan ugu cad waa iibsiga goobta ecommerce. Si kastaba ha noqotee, haddii bartaada ay kor u qaadeyso adeeg, beddeliddu waxay noqon kartaa tirada dadka soo booqda ee iska diiwaangeliya tijaabo bilaash ah, demo, soo dejin, webinar ama waxqabad kasta oo kale oo la muujiyey inay qiime leeyihiin. Beddelaad Analytics badanaa ku dar tijaabinta cunsurrada si aad ugu hagaajin karto goobta si aad ugu beddesho booqdayaal badan macaamiisha.
Falanqaynta Sirdoonka Macaamiisha - shirkado badani si firfircoon uma kormeeraan in macaamiishoodu sida dhabta ah u jecel yihiin iyo in kale ama waxa jid-gooyada u ah hawlgelinta kaamil ah. Nidaamyada u oggolaanaya jawaab celinta macaamiisha marinnada bulshada, sahannada iyo qodobbada kale ee xog ururinta ayaa bixin kara cilmi-baaris qiimo leh oo ku saabsan sida shirkaddaada loo arko iyo waxaad sameyn karto si aad u horumariso.
Falanqaynta Nolosha Macaamiisha - fahamka heerarka macmiilkaagu wuxuu muhiim u yahay kordhinta sii-haynta macaamiisha, kor u qaadista qiimaha macaamiisha, ka dibna muujinta mustaqbalka waxay horseedaysaa ka-qaybgalayaasha ugu guulaha badan ee aad haysato. Dhowr madal ayaa cabiraya heerarka iyo waliba kafaala-qaadayaasheena otomaatig ee xaga Xaqiiqda Isdhexgalka, Hubso inaad hesho demo nidaamkooda ah.
Falanqaynta Fariinta - otomaatiga suuq geynta, email, warbixinta sanduuqa, SMS, telefoon, iyo nidaamyo kale oo fariimo laguugu diro Analytics si ay kuu siiso waxqabad halkii olole, waxqabadka macmiilka, badanaana la midoobo midka kale Analytics nidaamyo ka caawiya hagaajinta farriintaada iyo fulinta ololahaaga.
Falanqaynta Saadaalinta - iyada oo lagu saleynayo waxqabadkii hore ee boggaaga, barnaamijyadan ayaa dhab ahaantii saadaaliyay waxa dabeecadda mustaqbalka ee booqdayaashu noqon doonaan. Saadaalin Analytics dhufto ee badanaa waxay bixiyaan moodello aad ku hagaajin karto oo aad ku saadaalin karto saameynta ay isbeddeladaasi ku leeyihiin waxqabadka bartaada. Tusaale ahaan, ka waran haddii aad ka jarto mushaharkaaga halkii guji badh oo aad kordhiso miisaaniyaddaada macluumaadka.
War-saxaafadeed dhab ah - Bixi aragti ku saabsan waxqabadka hadda iyo habdhaqanka booqdayaasha goobtaada waqtiga xaadirka ah. Waqtiga dhabta ah Analytics waa la garaaci karaa si wax looga beddelo habdhaqanka booqdayaasha, loo kordhiyo suurtagalnimada beddelaad, iyo in la bixiyo wacyigelin daqiiqad illaa daqiiqad ah jawaabta goobtaada.
Analytics iibinta - Kordhinta iibintu waa qayb sii kordheysa oo tikniyoolajiyad ah. Dashboorrada iibinta sida kafaala-qaadayaasheena at Iibka si toos ah ula dhexgeli shirkaddaada Salesforce CRM oo aad siiso maamulka iibka dhammaan faahfaahinta ay u baahan yihiin si ay u arkaan una saadaaliyaan waxqabadka iibka. Iyo iibiyaha, nidaamyadan waxay ka caawinayaan inay kordhiyaan waxsoosaarka, hagaajiyaan dhibcaha taabashada, iyo inay heshiisyo waaweyn si dhakhso leh u xidhaan.
Raadinta Falanqaynta - backlinks waa heerka dahabka ee qiimeynta internetka iyo darajada ayaa wada taraafikada iyo is-beddelka. Natiijo ahaan, qalab kaa caawinaya inaad kormeerto ereyada muhiimka ah ee mashiinka raadinta, tartamayaasha, iyo sida waxyaabahaagu u kala sareeyaan ayaa kaa caawin kara inaad soo jiidato martida cusub isla markaana aad dhisto istiraatiijiyado nuxur leh oo ganacsiga ku haya. Raadin lacag leh Analytics waxay ku siinayaan waxqabadka muhiimka ah iyo cabbiraadaha beddelka si aad hoos ugu dhigi karto qiimahaaga macdanta halkii aadna kordhin karto iibka.
Falanqaynta Bulshada - maaddaama internetka uu horumarey, shakhsiyaadka iyo shirkadaha waxay dhisteen awood ay ku kasbadaan kuwa soo kordha. Bulsho Analytics cabbiri kara awooddaas, la socon kara darajadaada bulsheed, kaa caawin doonta inaad fahamto sababta ay dadku kuu raacaan iyo mowduucyada ay inta badan kula macaamilaan. Kaa caawinta inaad kobciso raacitaanka bulshada iyo maamulka badanaa waxay u horseedaa kalsooni kororka dhagaystayaashaada ama bulshadaada - taas oo loo isticmaali karo in lagu qanciyo dallacsiintaada ama xitaa lagu wado isbeddel toos ah.
Dabcan, dhammaan nidaamyadan waxay ku siin karaan macluumaad xad-dhaaf ah oo badanaa u horseeda curyaannimo falanqeyn. Waa wax weyn in la arko Analytics dhufto ee furitaanka API-kooda iyo ku biirista dhinacyada kale ee saddexaad si ay si otomaatig ah u horumariyaan khibrada macaamiisha. Dhaliisha ugu weyn ee aan Analytics dhufto ee loo yaqaan 'platform' waa inay ururiyaan oo ay soo sheegaan xogta, laakiin marar dhif ah ayay sameeyaan talo bixin. Meelaha tijaabada beddelka ayaa sidan sifiican u sameeya - waxaan jeclaan lahaa inta soo hartay! Tusaale ahaan, ma fahmin sababta Analytics barxadaha ma bixiyaan aragti ku saabsan istiraatiijiyadda nuxurka waxayna ku siinayaan talooyin ku saabsan waxa ay tahay inaad wax ka qorto
Tags: falanqaynta akhlaaqdasirdoonka ganacsigagorfaynta beddelkaqeexitaanka falanqayntaqeexitaanka falanqaynta suuq geyntaqeexitaannofalanqaynta emaylkaAnalytics googlesida falanqaynta u shaqeysosida ay u shaqaysoIBMfalanqaynta suuqgeyntafalanqaynta farriintaxoog -saaridfalanqaynta saadaalintafalanqaynta waqtiga dhabta ahfalanqaynta goobtafalanqaynta bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadaAnalytics webfalanqaynta boggawebtrendswaa maxay falanqaynta
Kordhi Fursadaha Mawduucaagu ku dhacayo fayraska 5 taatikada ah
Tijaabiye Fariin: Qalab Bilaash ah oo lagu hubiyo Warqadda Emailkaaga ee Ka Soo Horjeeda Arrimaha Guud ee SPAM